विराटनगर, २८ असोज । मोरङ र सुनसरी जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण थप चारजनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार साझदेखि बुधबार बिहानसम्म सुनसरीका एकजना र मोरङका तीनजनाको मृत्यु भएको हो ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुनसरी इटहरीका एक महिला र मोरङ बेलबारीका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । विराट मेडिकल कलेजमा र नोबेल मेडिकल कलेजमा एक–एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सहप्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार बेलुका बेलबारी नगरपालिका–१० का ३७ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
मृतकमा दीर्घरोगको समस्या थिएन । २१ असोजमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका पुरुषलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मंगलबार प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पताल भर्ना गरेको केही समयपछि मृत्यु भएको डा. श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार बुधबार बिहान करिब ४ बजे वीपी प्रतिष्ठानको इमरजेन्सी वार्डमा इटहरी उपमहानगरपालिका–६ सुनसरीकी ६० वर्षीय संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ । मृतक महिलालाई २४ असोजमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
विराट मेडिकल कलेजमा बूढीगंगा गाउँपालिका–३ बाँसबारीका कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
विराट शिक्षण अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा ६० वर्षीय पुरुषको मंगलबार राति करिब १२ बजे मृत्यु भएको हो । अस्पतालको आइसोलेसन इन्चार्ज सुनिल देवका अनुसार मृतकलाई १५ असोजमा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
मृतकमा श्वासप्रश्वास र मृगौलासम्बन्धी पुरानै समस्या रहेको जानकारी देवले दिए । प्लाज्मा थेरापी बिधिबाट उपचार गराइए पनि सफल नभएको उनले बताए ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–५ घर भएकी कोरोना संक्रमित महिलाको नोबेल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । मंगलबार साँझ उपचारका क्रममा ४९ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो ।
अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले साँझ ७ बजेतिर उनको मृत्यु भएको जानकारी दिए । मृगौलाको डाइलासिस गर्नका लागि आइतबार बिहान महिलालाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । डाइलसिसअघि पीसीआर जाँच गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।